जहाँ यो प्रत्येक परिवारको सदस्य गर्न सुखद एक आरामदायक न्यानो घर, हिउँदमा वासस्थान सम्बन्धित छ।
तपाईं ग्याँस बिना देश घर गर्मी कसरी प्रश्न सामना भने, तपाईं भन्दा साधारण ताप विधिहरू विचार गर्नुपर्छ। आज, यो बिजुली छ।
एक केन्द्रीय ग्याँस आपूर्ति लाइन जडान गर्न सक्ने क्षमता कमी देश घरहरू र आर्थिक ग्याँस बिना घर गर्मी गर्ने बारे निजी सोच को मालिक हुन्छ। भिन्न एकाइहरु र ठूलो विविधता लागि ताप अवस्थित आज तथापि, ती सबै भन्दा घर भित्रका ग्याँस मार्फत थर्मल वितरण विधि गरम हावा मा दहन ऊर्जा रूपान्तरण सक्षम छन्।
यदि तपाईं 200 वर्ग मीटर को एक घर गर्मी गर्ने बारे सोच हो। ग्याँस बिना यो समस्या सम्बोधन गर्न अन्य तरिका विचार गर्न आवश्यक छ। हाल को वर्ष मा निजी घरमा धेरै मालिक थप गुणस्तरीय लाभदायक र प्रभावकारी छन् भनेर खडा-एक्लै गर्न प्रणाली स्विच गर्न प्रयास। तपाईं कम वृद्धि निजी घर को एक निवासी हुनुहुन्छ वा घरेलु, विभिन्न ईंन्धन, पत्थर प्रयोग बाफ ताप, ताप प्रयोग निर्माण डाटा को त गर्मी, साथै अडान-एक्लै बिजुली छ भने।
बिजुली र ग्याँस बिना घर कसरी हीट, तपाईँले तल पाउन सक्नुहुन्छ।
संचार बिना ताप
तपाईं संचार र पाइप बिना, प्रणाली मात्र हीटर समावेश हुनेछ ताप सेट गर्न सक्नुहुन्छ। radiators र कठिन राजमार्गहरू आवास एक सर्किट छनौट गर्दा एउटै कोठामा, तर सारा घर मा मात्र होइन सहज हुनेछ।
इलेक्ट्रोनिक, तरल, ठोस - ताप एकाइहरु ईंन्धन को एक किसिम प्रयोग गर्नुहोस्। यो परम्परागत प्रकारका सबै अवस्थामा छैनन् कि सस्ता र सहज बोलाउन उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ।
ताप घरमा को मुख्य विधि
तपाईं एक ग्याँस बिना घर गर्मी कसरी राम्रो बारेमा सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो ताप को संगठन को मामला मा साधारण रूपमा जो कार्य हो, बिजुली गर्न Resort गर्न सिफारिस गरिएको छ।
हामी लाभकारी कुरा भने, र्याङ्किङ्ग अन्तिम स्थानमा मा बिजुली लागत। यी उपकरणहरू लागि इन्धन, तपाईं पनि एकदम महंगा छ डिजेल, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी, गर्मी को 1 Gcal 3500 rubles खर्च हुनेछ। एकै समयमा तपाईं एक अप्रिय गन्ध, को ताप एकाइ नजिकै गठन गरिने सामना गरिनेछ। कमीकमजोरी भए तापनि डिजेल इन्धन धेरै उपभोक्ताहरु किफायती वैकल्पिक इन्धन स्रोत लागि हुन्छ।
यो इन्धन को सस्तो प्रकारको छ कोइला, प्रयोग गरेर घर गर्मी गर्न सम्भव पनि छ। हीटिंग यसलाई माथि वर्णन विधि तुलनामा चार पटक सस्ता खर्च हुनेछ। यसरी, गर्मी को 1 Gcal लागि एक हजार rubles भुक्तानी गर्न हुनेछ।
तपाईं ग्याँस बिना हिउँदमा घर गर्मी कसरी प्रश्न सामना भने, तपाईं जो briquettes को रूप मा आउछ पीट, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक बारेमा र आधा समय कोइला भन्दा बढी महंगा खर्च हुनेछ।
घर ताप लागि सबै भन्दा साधारण विकल्प एक सानो खर्च जो, तर तिनीहरूलाई सधैं सुविधाजनक छ प्रयोग गर्न दाउरा को प्रयोग, छ, तर तिनीहरूले कोइला भन्दा धेरै छिटो माध्यम बाल्न।
घरमा स्थापित छन् उपकरणहरू, तपाईं छर्रहरुमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ लागि, तिनीहरूले काठ बर्बाद आधारित छन् granules छन्। , सम्भव गर्मी को 1 Gcal 1,500 rubles तिर्ने प्राप्त गर्नुहोस्। यसबाहेक, इन्धन यस प्रकार इन्धन स्वतः लागू गर्न सम्भव छ जसमा बयलर, को लागि धेरै उपयोगी छ।
ग्याँस बिना ताप। विकल्प
जब मानिसहरूलाई प्रयोग जो इन्धन को स्थायी वा अस्थायी कमी, तपाईं ग्याँस बिना एक घर ताप, पनि बिजुली बिना व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अभ्यास अनुसार, हामी यी प्रविधिहरू प्रतिस्थापन भने, यो सम्भव एकदम सुरक्षित हुनेछ।
समस्या समाधान गर्न विभिन्न तरिका विचार, तपाईं कोइला वा काठ द्वारा शह छन् Fireplaces र stoves रुचि हुन सक्छ। यो विकल्प चयन गर्दा यसलाई ईटा को उपयुक्त संरचना निर्माण वा तयार बनाएको एकाइ किन्न आवश्यक हुनेछ। यो ताप एक वातावरण मैत्री तरिका व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्नेछ, र भट्टियों केही मोडेल ओवन र Hob धन्यवाद पकाउन गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं वास्तविक प्रश्न अगाडि उभिएर भने तपाईं कसरी ग्याँस बिना घर गर्मी सक्छ, मूल प्रविधि गर्न resorted जो निजी घरमा, केही मालिकहरूको अनुभव पालना गर्न सिफारिस गरिएको छ। तिनीहरूले बिजुली आफ्नै स्रोत द्वारा गरम छन्। यस मामला मा, तपाईं स्वायत्त शक्ति पुस्ता को दुई तरिका को एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यस स्वायत्त शक्ति स्रोत को ताप
कसरी बिजुली र ग्याँस बिना घर गर्मी, तपाईं ध्यान दिएर लेख पढेर सिक्न हुनेछ। तपाईं यो सबै, पैसा बचत गर्न र अझै पनि मूल हुन चाहनुहुन्छ भने, यो सौर ऊर्जा द्वारा गरम गर्न सकिन्छ। यसो गर्न, तपाईं गर्मी मा सूर्य ऊर्जा रूपान्तरण गर्न सक्षम छन् जो सौर पैनल, किन्न आवश्यक छ। यस मामला मा, तपाईं बिजुली बिना काम गर्दछ जो हीटर, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा उपयुक्त उपकरण को अधिग्रहण मा खर्च गर्न, तर सञ्चालन समयमा, तपाईं प्रकाश प्राप्त हुनेछ र गर्मी लगभग निःशुल्क छ।
तपाईं अझै पनि कसरी ग्याँस बिना छुट्टी घर हीट सोचिरहेका छन्? तपाईं अझै पनि गर्मी मा हावा ऊर्जा रूपान्तरण समावेश जो प्रविधि, फाइदा लिन सक्छ। यो अन्त गर्न, विशेषज्ञहरु बिजुली मा यांत्रिक ऊर्जा रूपान्तरण सक्षम छ कि तयार बनाएको उपकरण किन्न सुझाव दिन्छौं। धेरै घर कारीगरों यस्तो उपकरणहरू आफूलाई भेला हुन्छन्। यो एकाइ गर्न एकदम सरल छ कि टिप्पण लायक छ, तपाईं ब्याट्री र alternator यसलाई जडान, एक हावा कल गर्न आवश्यक हुनेछ। गर्मी उत्पादन यस्तो विधि, आधुनिक माली अनुसार, यो ती क्षेत्रमा जहाँ कुनै प्राकृतिक ग्याँस पाइपलाइन छन् मा देश घरहरू गर्न अत्यन्तै लाभदायक छ। यो विरलै-भ्रमण डोमेन लागि विशेष गरी साँचो हो।
एक बयलर र पाइप बिना ताप
ताप सामान्यतया radiators र पाइप को निर्माण जडान जो एक बयलर, प्रदान गर्न सकिन्छ। यो संचार गर्मी धेरै कोठा मा, आधार उपकरण शक्ति मा। किनभने त्यहाँ कुनै बयलर र पाइप हुनेछ देश घर को लागि, सबै भन्दा सामयिक समाधान छ।
को गर्मी मा तपाईं एक गर्मी स्रोत, उदाहरणका लागि, ईटा वा उपयुक्त धातु ओवन, दुई आसन्न कोठा न्यानो जो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम अक्सर, यो प्रविधी हुँदा Fireplaces प्रयोग।
हामी एउटा पुरानो रूसी घर, pyatistenki को सिद्धान्त मा निर्माण गरिएको छ जो कुरा छन् भने, त्यसपछि उहाँले यस्तो भट्टीमा रूपमा गर्मी को केवल एक स्रोत हुनेछ। यो दुई घनिष्ठ चौथाई बीच स्थित केन्द्र, राख्न सबै भन्दा राम्रो छ।
ताप गर्मी पंप आधारित
तपाईं ग्याँस बिना घर गर्मी रूपमा सस्तो मुद्दा समाधान गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले इन्धन प्रयोग समावेश गर्दैन एकदम एक रोचक विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रविधिलाई एक गर्मी पंप भनिन्छ जो एकाइ, असामान्य काम मद्दत संग बुझे हुन्छ।
संरचना र कामकाज
गर्मी पंप Freon, साथै Chambers, अर्थात् एक गर्मी एक्सचेंजर, एक भल्ब कोठामा र खुम्च्याउने एक अधिकता भरिएको छन् ट्यूब बनेको छ। उपकरण एक फ्रिज त्यसै गरी सञ्चालन हुनेछ। मा ट्यूब माध्यम बित्दै जो तरल freon ग्याँस, आधारित एकै समयमा सञ्चालनको सिद्धान्त, जमीन वा पानी कम। त्यहाँ जाडो तापमान तल गिर प्लस 8 डिग्री छैन। यस्तो अवस्थामा Freon यो उद्देश्य लागि यो3डिग्री सेल्सियस मात्र आवश्यक छ, फोडा गर्न सुरु हुन्छ।
महामण्डल हुन्छ जो एक पदार्थ अप आरोहण, जहाँ यो एकदम संकुचित छ खुम्च्याउने को कोठामा प्रवेश गर्छ। तपाईं थाह छ, तपाईं एक सीमित ठाउँ मा कुनै पनि पाठका सामाग्री squeeze गर्दा, यो यसको तापमान मा वृद्धि गर्न जान्छ, त्यसैले freon 80 डिग्री गर्न गरम छ।
को ताप गर्मी एक्सचेंजर मार्फत गठन तिर्ने, जनसंचार, को भल्ब कोठामा जहाँ तापमान र दबाव कम छन् मा आयोजित छ यसरी यो तरल Freon मा उत्तेजित गर्दछ। अर्को चरण मा, त्यो माथि न्यानो र फेरि चक्र बारम्बार गहिरो जान्छ।
बिना घर हीट सस्तो ग्याँस कसरी अझै पनि थाहा छैन? तपाईं पाठ्यक्रम, बिजुली आवश्यक यो राम्रो कुशल प्रविधि, जो को बोध लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यो कूलेंट को प्रत्यक्ष ताप तुलनामा एक disproportionately सानो रकम बिताएको गरिनेछ।
गर्मी पंपों को किसिमहरु
तपाईं गर्मी पंपों, जो माथि प्रविधिहरू को ताप सिस्टम को व्यवस्था आवश्यक हुनेछ प्रकार विचार amiss हुन छैन, ग्याँस बिना घर गर्मी रूपमा सस्तो प्रश्न विचार भने। को Freon हीटिंग को यो उपकरण फरक मोड को मोडेल, एक कम स्तर गर्मी स्रोत हो।
घर एक जमीन पानी स्रोत छ भने, यो एक पानी पम्प, यो उद्देश्य लागि ठीक डिजाइन गरिएको छ जो चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। उपकरण यस प्रकारको भूमिगत पानी को लागि उपयुक्त छ। बिक्री हावा र सतह पंपों देख्न सकिन्छ। शीर्षक एकाइ स्थापित गर्ने ताप प्रणालीमा कूलेंट विभिन्नता समावेश छ। "जमीन-को हावा", "पानी-पानी" "जमीन-पानी" वा: यसरी, यन्त्र गर्न राहदानी निम्न शब्दहरू समावेश गर्नेछ।
ग्याँस प्रयोग बिजुली बिना ताप घरमा
एकदम अक्सर, देश घरहरू मालिक ग्याँस बिना घर गर्मी रूपमा सस्तो गम्भीर प्रश्न सामना गर्दै हुनुहुन्छ। ताप को सबै भन्दा साधारण विधि बिजुली प्रयोग गरिन्छ जो एक हो।
वित्तीय क्षमता आधारमा तपाईं अधिकतम ताप प्रदान गर्न सक्षम हुने बोट र उपकरण चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
विद्युत उपकरण निम्न प्रजातिहरू उपलब्ध: Fireplaces, हीटर, "न्यानो तल्ला" प्रणाली, इन्फ्रारेड ताप र Convectors। लोकप्रिय सिस्टम "न्यानो तल्ला" यदि त्यहाँ ग्याँस प्रयोग बिना घर हीट आवश्यक छ, आवासीय परिसर लागि ताप एकदम अक्सर प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले भुइँमा मात्र होइन तर पर्खाल र छत को सतह मा स्थापित छन्। देश घर को लागि सबै भन्दा सामयिक समाधान हीटर, जो छोटो समयमा स्वीकार्य स्तर परिसर भित्र तापमान वृद्धि हुनेछ।
बिजुली बयलर को प्रयोग
कसरी cheaply ग्यास बिना घर हीट निर्णय गर्दा, एक वैकल्पिक बिजुली बयलर रूपमा विचार गर्न निश्चित हुन। यो ताप सिस्टम थप लागू गर्न जटिल हुन, तर एकै समयमा सबैभन्दा प्रभावकारी हुनेछ। तपाईं आवश्यक तापमान गर्न पानी गर्मी हुनेछ जो बयलर, खरिद र स्थापना गर्न आवश्यक हुनेछ। कि कूलेंट पछि ताप सिस्टम मार्फत निरन्तर चलिरहनु हुनेछ।
बिजुली बयलर एक गर्मी स्रोत रूपमा विचार, फेंकना जो बीच निम्न छन् लाभ, धेरै: छोटो समयमा आफ्नो घर गर्मी गर्ने क्षमता, उपकरण प्रयोग को सजिलो, ताप को स्तर, साथै ग्याँस बिना ताप लागि अनुमति दिन्छ जो कुनै पनि समयमा ताप सिस्टम को स्थापना, समायोजन गर्न सक्षम हुनुको उपलब्धता।
ठोस इन्धन बयलर को प्रयोग
कसरी ग्याँस बिना एक निजी घर हीट निर्णय गर्दा, तपाईं एक ठोस इन्धन बयलर रुचि हुन सक्छ। विशेष गरी यस्तो विकल्प ताप युरोपेली देशहरूमा लोकप्रिय भयो। आर्थिक ताप, साथै प्रयोग मा सजिलो प्रदान सक्षम ठोस एकाइहरूको यस्तो प्रकारको। यस्तो उपकरणहरू मात्र काठ मा छैन सञ्चालन, तर पनि छर्रहरुमा, कोइला, र पीट लागि। गर्मी जो एक कूलेंट रूपमा कार्य पानी, माध्यम नाली मार्फत आपूर्ति गरिनेछ। लामो समय को लागि ताप को यो विधि, यो कोठा भित्र आवश्यक तापमान कायम गर्न सम्भव बनाउँछ यो सबै केवल एउटा लोड मा एक पर्याप्त लामो इन्धन बलिरहेको धन्यवाद छ।
तपाईं कसरी cheaply ग्यास बिना घर गर्मी गर्न सिकेका छन् भएपछि, तपाईं माथि विचार को एक लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ठीक जो एक एक विशेष मामला मा सबै भन्दा राम्रो हुनेछ निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
पर्खाल स्ट्यापलर गर्न battens कसरी नङ गर्न?
आफ्नै हातले ग्रीनहाउस प्रोफाइल। आफ्नो हातले plasterboard लागि हरितगृह प्रोफाइल
प्लास्टिक Windows को स्थापना: एक डबल-काचित विन्डो चयन गर्न?
तल्ला slabs को स्थापना: स्ट्याकिङ प्रक्रिया र विशेष गरी अंकन तत्व
रोस्ट चिकन - एक पकवान, बाल्यकाल देखि मनपर्ने
एक च्याउ चोट के हो?